LG G2 ကင်မရာ APK သည် Slow Motion ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည် Androidsis
အသုံးပြုသူများအရာတစျခု LG က G2လက်ရှိစျေးကွက်ထဲမှာရှာတွေ့နိုင်မယ့်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တာအပြင်၊ အကယ်၍ နှိုင်းယှဉ်ထားသောဗွီဒီယိုကိုအမြန်နှုန်းဖြင့်ကြည့်ပါက LG G3 နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်, ကနေဖြစ်ပါတယ် ပါ ၀ င်သည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကင်မရာအလွန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်ဖြုန်းပေမယ့် LG.
နောက်တစ်ပိုဒ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ် XDA Developers Android အသိုင်းအဝိုင်း, အ LG G2 ကင်မရာအပလီကေးရှင်းသည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များတွင်တိုးတက်ခဲ့သည် LG ကိုယ်တိုင်ကကျွန်ုပ်တို့အားငြင်းပယ်နိုင်သောအလားအလာအားလုံးကိုရယူရန်။
LG G2 ကင်မရာကိုအခြား Android အမျိုးအစားများတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါကကျွန်ုပ်ကိုမပြောနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်မည်သူမဆို apk ကို install လုပ်ရန်အားပေးသည်ဆိုပါက၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်ကြိုးစားခဲ့သည့် Android terminal နှင့်သင်၏ Android ဗားရှင်းတို့ကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။
1 XDA မှ LG G2 ၏ကင်မရာကဘာကိုကမ်းလှမ်းပေးသနည်း။
2 XCam မှပြုပြင်ထားသော LG G2 ၏ကင်မရာကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
XDA မှ LG G2 ၏ကင်မရာကဘာကိုကမ်းလှမ်းပေးသနည်း။
La LG G2 ကင်မရာသည် XDA မှပြုပြင်ထားသော XCam v5.0 ဗားရှင်းတွင်ရှိသည်, LG သည်လျှို့ဝှက်အလားအလာကိုအပြည့်အဝအသုံးချရန်ကမ်းလှမ်းထားသည်။ LG Mobile ၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်ခေါင်းဆောင်များကဥပမာအားဖြင့်လူသိအများဆုံးနှေးကွေးသောအသံသွင်းခြင်းလုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့် အနှေးလှုပ်ရှားမှု.
အပြင်တိုးတက်မှုသို့မဟုတ်ဆက်ပြောသည် function ကိုမှ, အ XCam ကင်မရာ ၎င်းတွင်တိုးတက်မှုများစွာရှိသည် ဓါတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုနှစ်ခုလုံးကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ပါ, ပိုမြန်အပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်း ရုပ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖမ်းမိသောအရည်အသွေးကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်စရာများလည်းရှိသည်။
XCam မှပြုပြင်ထားသော LG G2 ၏ကင်မရာကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ဒီကို install လုပ်ပါ XCam ဗားရှင်း 5.0, ကသာနှင့်အတူလောက်ပေလိမ့်မည် ဒီ apk ကို download လုပ်ပြီးပုံမှန်အတိုင်းထည့်သွင်းပါ ၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင် install လုပ်ရန်ခွင့်ပြုချက်များကိုမဖွင့်မှီဆိုလိုသည် မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များ ဒီ application ကို install လုပ်ချင်တဲ့ Android terminal ရဲ့ settings ထဲကနေ။
ကင်မရာကိုယ်နှိုက်ထက်အခြား directory များတွင် install လုပ်သွားလိမ့်မည် LG မူရင်းကင်မရာသင်သည်သင်၏ Android အက်ပလီကေးရှင်း၏အံဆွဲထဲ၌နှစ်မျိုးလုံးရရှိနိုင်သည့်အတွက်လျှောက်လွှာ၏မူလဗားရှင်းကိုမဆုံးရှုံးပါစေနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » [APK] LG G2 ကင်မရာကို Slow Motion function ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီးကူးယူပါ
android terminal အတွက်ဒီ app ဟာတရားဝင်ပါသလား။
jose manuel အားစာပြန်ပါ
Nexus5မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
Jorge Calleja (@JCAndroid) ဟုသူကပြောသည်
အခြားဆိပ်ကမ်းများ၌မရှိသော LG ၏ကိုယ်ပိုင်အထုပ်ကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားသောကြောင့်၎င်းအပလီကေးရှင်းကိုအခြား terminals များ (အနည်းဆုံး - LG မဟုတ်) တွင်တပ်ဆင်။ မရပါ။
"လူတန်းစား 'com.lge.systemservice.core.LGContext' ကိုရှာ။ မရပါ။ "
ငါ့အမှု၌ငါသည်ငါ့ Nexus4ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
Jorge Calleja (@JCAndroid) ကိုစာပြန်ပါ
အဆုံး၌မူ LG G2 Roms နှင့် G3, G2 Pro နှင့် G Flex တို့၏ ports နှစ်ခုလုံးအတွက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ငါ 4K မှာ pixelated အရာအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာ application ကဆိုးရွားစွာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ နှေးနှေးကွေးစွာကြည့်ရတာမျက်နှာပြင်ကအရမ်းမှောင်နေပြီး 120f မှာ ၁၀၀% မူလ Lg G2 ကိုမပြုပြင်နိုင်ဘူး။
SERGIO CANTERO ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ LG G2 တွင်မှော်အပြုအမူသည်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါ၊ အနှေးကင်မရာတစ်ခုလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ထွက်လာသည်
SERGIO CANTERO သို့စာပြန်ပါ
moto G တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ
moto x ဟာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
esteban morales ကိုပြန်ပြောပါ
moto g ကိရိယာအစုံအလင် Kat တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။
အဆိုပါနှေးကွေးသောအလုပ်မလုပ်ပါဘူး, မမှော်အကျိုးသက်ရောက်မှု ...
ငါ့ lg g2 တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ မျက်နှာပြင်အနက်ရောင် သင်သည်တောက်ပသောအရာတစ်ခုကိုသာအနီးကပ်အာရုံစိုက်မည်ဆိုလျှင်သင်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုသာမြင်နိုင်သည်
ငါဆုံးမ ... ပြင်ပကperfectlyုံအလုပ်လုပ်တယ်။ ပြproblemနာကအလင်းနည်းတယ်
Lg G2 mini တွင်တပ်ဆင်ပြီးလည်ပတ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသာပေါင်းထည့်သည်၊ ၎င်းသည်ဓာတ်ပုံကိုလုပ်ဆောင်သော်လည်းထွက်မလာသည်၊ ဗွီဒီယိုတွင်နှေးကွေးသောလုပ်ဆောင်မှုကိုပေးသည်မဟုတ်။ ဖျက်လိုက်ပြီ
မြင်ကွင်းကျယ်ပုံရိပ်ကိုသိမ်းဆည်းရန်အတွက် micro SD မဟုတ်ဘဲ "internal" သိုလှောင်ရာနေရာကိုရွေးရမည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်ကယ်တင်လိမ့်မည် !!
Diego PérezValdés (@diego_dgopv) ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့် galaxy s4 မှာရပ်လိုက်တဲ့ app ကိုငါဖွင့်လိုက်ရင်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်ကိုဖော်ပြပါ ကျေးဇူးပြု၍ ဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ = (။ ဖျက်လိုက်သည် !!!
Diego PérezValdés (@diego_dgopv) ကိုအကြောင်းပြန်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ LG G » D80620a Android 4.4.2 Kit Kat တွင်နှေးကွေးမှုသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ကင်မရာနဲ့သာကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တာ။ ငါမှော်အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲဆိုတာတောင်မှမသိရပါဘူး။ ဓာတ်ပုံများအတူတူပင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်၊ ဗွီဒီယိုသည်ခမ်းနားထည်ဝါသော်လည်းကြီးမားသော်လည်းကောင်းမွန်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဓာတ်ပုံများအတွက်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်မထိုက်တန်ပါ။ ၎င်းသည်ဗီဒီယိုအတွက်ဖြစ်ပါကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ငါကရည်ညွှန်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မျှော်လင့်ပါတယ်
Slow motion သည်ကျွန်ုပ်၏ LG G2 D80620a Android 4.4.2 Kit Kat တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ကင်မရာနဲ့သာကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တာ။ ငါမှော်အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲဆိုတာတောင်မှမသိရပါဘူး။ ဓာတ်ပုံများအတူတူပင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်၊ ဗွီဒီယိုသည်ခမ်းနားထည်ဝါသော်လည်းကြီးမားသော်လည်းကောင်းမွန်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဓာတ်ပုံများအတွက်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်မထိုက်တန်ပါ။ ၎င်းသည်ဗီဒီယိုအတွက်ဖြစ်ပါကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ငါကရည်ညွှန်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မျှော်လင့်ပါတယ်
မေးခွန်းတစ်ခုခု၊ ငါ terminal ကိုအမြစ်တွယ်နေသင့်သလား။ မလိုအပ်လား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Federico Peduto ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို။ ၅.၀ ကင်မရာကိုကျွန်တော် install လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်နှေးကွေးသော option ရှိသော်လည်းဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးပြီးနောက်၎င်းသည်ပုံမှန်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ မင်းမှာအကြံဥာဏ်ရှိလား။ ငါ 5.0 kitkat ရှိသည်
Federico Peduto အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကင်မရာကို install လုပ်ပါ။ ငါနှေးကွေးစွာရွေ့လျားသောအခါပုံသည်အလွန်နက်သည်။
မင်္ဂလာပါပထမ ဦး စွာ LG TERMINALS အတွက်သာအလုပ်လုပ်သည် !!! သူသည်၎င်းကိုအကြိမ်တစ်ထောင်ရေးသားခဲ့သည်၊ ၎င်းကို SAMSUNG, MOTOROLAS စသဖြင့်မထည့်ပါနှင့်။
ဒုတိယ - ကျွန်ုပ်တွင် Lollipop ပါသော LG G2 ရှိပြီးတပ်ဆင်ခြင်းသည်အလုပ်မလုပ်သော်လည်း၎င်းအပလီကေးရှင်းသည်စတင်မစတင်ပါ။
ဟိုဆေး chable ဟုသူကပြောသည်
ငါသည်ငါ့ Lg pro lite ကို d680 ပေါ်မှာ installed ကြောင့်အကြီးသွား? လေးစားပါတယ်
Jose Chable ကိုပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်တွင် lollipod2ရှိ lg g5.0.2 ရှိသော်လည်း၎င်းသည်မစတင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အားအဖြေတစ်ခုပေးရန်သို့မဟုတ်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အခြား apk ကိုပြောပြနိုင်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အလွန် Techno ဟုသူကပြောသည်
LP 2.x ပါသော LG G5.0 သည် XDA ဖိုရမ်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော hoc version ကိုအသုံးပြုရမည်။
Raul carrascosa ဟုသူကပြောသည်
ငါဗားရှင်း2ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ဒါဟာ lg g4.4.2 အပေါ်သာ။ ကောင်း၏တတ် !!
Raúl carrascosa အားပြန်ပြောပါ
lg optimus g တွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမူလကင်မရာကိုပုံတူပွားစေသော slowmotion လုပ်ဆောင်ချက်များသို့မဟုတ်မည်သည့်အရာမျှမပေးပါ
သူကကျွန်တော့်အတွက်အဆင်ပြေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါဖုန်းထဲကို recovery တစ်ခုနဲ့အုတ်တပ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ app ပျောက်သွားတယ်။ llg G2 D 805
Omar Alfonso အားစာပြန်ပါ
Limelight သည်သင်၏ PC မှအကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းများကို streaming မှတစ်ဆင့်သင်၏ Android tablet သို့ဖုန်းသို့ပို့သည်